Kenya oo war adag kasoo saartay weerarkii saaka & Dagaalkii saldhiga SIMBA
January 5, 2020 Mahad Jama 0
NAIROBI(P-TIMES)- Wasaaradda Gaashaandhiga Kenya ayaa war qoraal ah oo kooban kasoo saartay kaga warbixisay weerar saaka Al-shabaab ay ku qaadeen saldhiga SIMBA ee ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Manda Bay ee gobolka xeebta Lamu.
Wasaaradda Gaashaandhiga ayaa qoraalkaasi ku xaqiijisay in saaka abaara 5:30 am aroornimo uu dhacay weerar isku day ah oo lagu soo qaaday saldhiga balse ay iska caabiyeen ciidamada Kenya ee saldhigaasi ku sugnaa.
Wasaaradda ayaa sheegtay in halkaasi lagu dilay afar kamid ah argagixisadii weerarka soo qaaday, kadib markii si guul ah ciidamadu iskaga caabiyeen isku dayga weerarka lala beegsaday saldhiga sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda Gaashaandhigu.
Dowladda Kenya ayaa sidoo kale xaqiijisay in weerarkaasi uu dhaliyey dab ka kacay haamaha shidaalka kaydiya ee saldhiga yaalay, kaasi oo markii dambe la bakhtiiyay laakiinse aysan jirin wax khasaare kale ah oo halkaasi ka dhashay.
Al-shabaab ayaa hore u sheegtay in dagaalyahanaheedu gudaha u galeen saldhiga oo ay burburiyeen agabkii militari ee yaalay xerada,oo ay ku jireen diyaarado dagaal iyo gaadiid ciidan, waxaana ay tilmaameen in weli dagaalku ka socdo gudaha saldhigaasi SIMBA halka Kenya ay sheegtay in lasoo af jaray weerarkaasi.